psc Archives : PSC SUCCESS
World History (विश्व ईतिहास) Quiz Series 1
Geography (भुगोल) Quiz Series 1
Geography (भुगोल) Series 1 Answers
The Great Victoria Desert (भिक्टोरिया मरभुमि) कहाँ अवस्थित छ ? Answer: Option B संसारको सवैभन्दा ठुलो खाँडि (Gulf) कुन हो ? Answer: Option A सन २०१७ मा विश्वमा सबैभन्दा बढि सुन उत्पादन…
Geography (भुगोल) Series 1
1. The Great Victoria Desert (भिक्टोरिया मरभुमि) कहाँ अवस्थित छ ? A. Canada B. अष्ट्रेलिया C. पश्चिम अफ्रीका D. उत्तर अमेरिका 2. संसारको सवैभन्दा ठुलो खाँडि (Gulf) कुन हो ?…
लोकसेवा (PSC) का लागि समसामयिक Border wall बनाउन कंग्रेसले अस्विकार गरेपछि अमेरिकन राष्ट्रपति Donald Trump ले आफ्नो कार्यकालको दुई वर्षमा पहिलो पटक March 15 मा भिटो शक्ति प्रयोग गरेका छन । हङकङमा भएको एशियाली युथ एथ्लेटिक्स…
PSC समसामयिक 2075-12-02
लोकसेवा (PSC) का लागि समसामयिक Cyclone idai (Tropical Strom) ले जिम्बावेको पुर्वि भागका पुल तथा घरहरु उडाएको छ । Yellow Vest (Gilets jaunes) : एक प्रकारको बिरोद कार्यक्रम (France) भारतकी पहिलो महिला…
PSC समसामयिक 2075-12-01
लोकसेवा (PSC) का लागि समसामयिक न्युजिल्याण्डको क्राईस्टचर्चका दुई मस्जितमा शुक्रबारको प्रार्थनाका लागि भेला भएकाहरु बिच गोलिबारि । Climate Change विरुद्धको प्रदर्शनमा विश्वका विभिन्न देशका विद्ध्यार्थीहरुले सहभागिता जनाएका छन । यसको…
मनोरन्जनकालागि मुक्तक पीडा होइन मल्हम हुनुपर्छ सुन्दैमा मन रमझम हुनुपर्छ युगौ युगसम्म कायम रहने खाएको त्यो कसम हुनुपर्छ ।। लेखक : पिमिरे
यो वेवसाईट विषेश गरेर लोकसेवाको तयारी गरिरहनु भएका साथिहरुका लागि तयार गरिएको हो । यसमा विभिन्न स्रोतहरुबाट स‌ंकलन गरिएका सामाग्रीहरु राखिन्छ। यस्ता सामाग्रीहरु लोक सेवा आयोगकाे परिक्षााकाे तयारी गरिरहनु भएका…